Lionel Messi Oo Ka Hadlay Wacdarihii Cristiano Ronaldo Ee Habeen Hore Iyo Suurtogalnimada Inay Iska Hor Yimaaddaan – Latest Sports News
Lionel Messi Oo Ka Hadlay Wacdarihii Cristiano Ronaldo Ee Habeen Hore Iyo Suurtogalnimada Inay Iska Hor Yimaaddaan
Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa si wayn u amaanay ninka ay xifiltamaan ee Cristiano Ronaldo wuxuuna sheegay in saddexdii gool ee uu Ronaldo ka dhaliyay kulankii Atletico Madrid ay ahaayeen kuwo mucjiso ah wuxuuna sidoo kale Messi ka hadlay isku aadka Champions league iyo haddii ay ka fikirayaan Juventus.
Lionel Messi laftiisa oo laba gool ka dhaliyay isla markaana laba gool caawin ka sameeyay kulankii Lyon ayaa qiimayn ku sameeyay guushii ay kooxdiisa Barca xalay ka gaadhay Lyon oo ay hore barbaro gool la’aan ah ugula soo galeen kulankii lugtii hore ee France ka soo qabsoontay.
Ugu horayn Lionel Messi oo wax laga waydiiyay guushii Juventus ee kulankii Atletico Madrid iyo saddexleydii Ronaldo ayaa yidhi: ” Wixii ay Cristiano Ronaldo iyo Juventus sameeyeen cajiib ayuu ahaa. Waxaan filayay in ay Atletico Madrid ay ka sii adkaanayso. Saddexdii gool ee Ronaldo waxay ahaayeen habeen mucjiso ah”.
Messi iyo ciyaartoyda kooxdiisa Barcelona oo barri ogaan doona kooxda ay ku aadi doonaan ayaan ka fikrayn Juventus wuxuuna Messi yidhi: “Dhamaan kooxuhu way wada dag yihiin. Tusaale ahaan Ajax waxay soo muujiyeen in ay yihiin koox da’yar ah oo layaableh, iyagu cidna kama cabsanayaan”.
Lionel Messi ayaa aaminsan in koox kasta oo lagu aadiyo ay noqon doonto mid adag oo ay waajib ku tahay in ay naftooda u diyaariyaan wuxuuna yidhi: “Micno ma laha cida aanu wajahaynaa, waxay noqon doonan kuwo adag. Waxaa waajib nagu ah in aanu naftayada u diyaarino tartan adag”.
Lionel Messi ayaa sidoo kale qiimayn ku sameeyay kulankii Lyon wuxuuna yidhi: ” Waxaanu kulankan ku tagnay min bilawgii iyada oo aanu kubbada si fiican u wareejinay, dhibaato ayaa jirtay kadib markii ay ka dhigeen 2-1 maadaama oo aanu naftayada ku adkaynay kubbadaha sare, waxba may samayn ilaa intaas ka hor”.
” Nasiib wanaag waxaanu ka dhignay 3-1, mar labaad ayaanu deganaan karnay. Goolkii 3-1 waxa uu ayra ahaa mid la joojiyay laakiin naasiib wanaag kubbadu way samaysay. Markii ay 3-1 ahayd, waxaanu helay banaan badan, waxaananu si deg deg ah uga soo bixi karnay weerarka deg deg ah” ayuu Messi hadalkiisa sii raaciyay.
Free Live Stream: Dodgers vs Blue Jays
WATCH: LA Dodgers vs Toronto Blue Jays – Live Streaming
LA Dodgers vs Toronto Blue Jays – Live Streaming
Live Stream: LA Dodgers vs Toronto Blue Jays
Watch Live: NY Yankees vs Oakland Athletics #MLB
WATCH: Oakland Athletics vs New York Yankees – Live Streaming
NY Yankees vs Oakland Athletics – Live Streaming